Salaamanews » Daawo: Fannaanad codkeeda laga daba dhacay oo hees aan caadi aheyn soo bandhigtay
Home » Suugaan Daawo: Fannaanad codkeeda laga daba dhacay oo hees aan caadi aheyn soo bandhigtay Print - Daabace: SalaamaNews - Dec 25th, 2012 // Ka Jawaab	Qoraallo La Xiriira
Fanaaanka caanka ah ee Farxaan Xiddig oo si weyn loogu soo dhaweeyay MuqdishoDaawo:xulka heesta maantaMasrixii qaranka Soomaaliya oo u baahan taageero degdeg ahPuntland: Wada shaqeynta saxaafadda iyo maamulka oo laga doodayDaawo: “Dhaayo jaceyl” xulka heesta maanta (Salaamanews)-Munaasibad si weyn loo soo qaban qaabiyay oo habeenkii xalay ahaa ka dhacday magaalada Amsterdam, ee dalka Holland, ayaa waxaa heeso layaableh ku soo bandhigtay fannaanada codkeeda dadyoow badan ay ka heleen Ubax Nacfi oo todobaadkanna soo qaaday heesta (Garasho) oo noqotay tan ugu saameynta badan todobaadkan.
Fannaanadda oo taageerayaasheeda ka soo qeyb galay munaasibadda la hadashay inta aanay billaabin qaadista heesihii xalay ayay shaacisay in sanadka 2013-ka ay u diyaarisay heeso ay rajeyneyso inay ka heli doonaan dhamaan inta taageerta iyo inta xiiisaha u qabta fanka Soomaaliyeed.
Ubax Nacfi waxay ku nooshahay dalka Holland, waxayna ku luuqeysaa heeso aad u macaan, iyadoo dadkii xalay kasoo qeybgalay xafladia isweydiinayeen Fannaanada oo ay horay u maqli jireen codkeeda iyo muuqaalkeeda aad loola dhacay.
Ubax oo da’deedu tahay 19-jir ayaa kamid ah fanaaniinta mustaqbalka wanaagsan ku dhex leh bahda fanka Soomaaliyeed, waxaana la filayaa in sanadkan ay soo bandhigi doonto heeso cusub.
Halkan hoose ka daawo heesta Garasho oo ay fannaanada Ubax dhawaan soo qaaday.
Tags: suugaan, warar « Qoraalkii HoreDaawo: Ra’isal wasaare David Cameron oo wacadaro la yaab leh ka dhigay Afghanistan	Qoraalka Xiga »Madaxweyne Beshar Al-asad oo ogolaaday wada hadal uu la galo fallaagada dalka Syria	Halkan Hoose ku Jawaab